Miteraka Fanavakavahana sy Ahiahy Momba Ny Fiainana Manokana Ny Filitiana Rongony Atao Amin’ireo Olona Mpandray Fanampiana Ara-tsosialy Ao Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Miteraka Fanavakavahana sy Ahiahy Momba Ny Fiainana Manokana Ny Filitiana Rongony Atao Amin'ireo Olona Mpandray Fanampiana Ara-tsosialy Ao Aostralia
Voadika ny 23 Mey 2017 13:12 GMT
Fifangaroana ataon'ny mpanoratra: Sary tao amin'ny Wikimedia (JonRichfield, CC BY-SA 3.0) sy Pixabay (Creative Commons CC0)
Tokony hampahafantatra andrana fitiliana rongony ho an'ireo mpandray fanampiana ara-tsosialy ny governemanta Aostraliana. Mety halaza eo amin'ireo mpifidy ity fepetra ity. Tamin'ny fitsapan-kevitra antserasera notontosain'ny isideWith.com nanomboka tamin'ny taona 2015, namaly “Eny” ireo valinteny maherin'ny 35 000 tamin'ny fanontaniana hoe “Tokony hotiliana rongony ve ireo mpandray fanampiana ara-tsosialy?”.
Na izany aza, nahazo resabe antserasera teo amin'ireo Aostraliana izany izay mahita izany ho fanamafisana ny fitsarana an-tendrony manodidina ny fahantrana sy ny tsy fananana asa na fanitsakitsahana ny fiainana manokan'ny olona.
Ny Centrelink no sampan-draharaham-panjakana tompon'andraikitra amin'ny fandoavam-bola amin'ny fanampiana ara-tsosialy sy tolotra hafa marobe momba ny maha-olombelona. Mahakasika olona 5 000 amin'ireo mpitady asa ao amin'izy ireo sy ny fandoavam-bola ho an'ny tanora ny andrana, izay hotiliana kisendrasendra amin'ny fifohana rongony (fanafody) tsy ara-dalàna. Toerana telo no hosafidiana.
Hatokan-toerana ireo izay hita fa mihinana na mifoka rongony aorian'ny fitiliana ary hiatrika famerana hafa. Ny fanonkanan-toerana dia ahitana famerana karazana entana sy tolotra ary mety ho holaniana amin'ny sakafo sy ny fampiantranoana ny fandoavam-bola ho an'ny mpandray fanampiana.
Marobe ireo fisalasalana tao amin'ny Twitter, tahaka ny an'i Clancy Benson:
Natao fotsiny mba hahazoana lohatenim-baovao sy hanamafisana ny fitsarana an-tendrony ny “fitiliana rongony ho an'ny mpandray fanampiana ara-tsosialy”
Tsy ny rehetra no manohitra ny hevitra:
Tsy afaka mamaly ireo fitarainana mikasika ny fitiliana rongony ho an'ny mpandray fanampiana #auspol. Fantatr'izy ireo ve fa volantsika no omena ireo mpandray fanampiana, ampiasaina amin'ny fividianana rongony (fanafody)?
Mila atao fitiliana rongony (fanafody) ianao mba hahazoana ny ankamaroan'ny asa tato aho ato. Nahoana ny mpandoa hetra no handoa vola ho an'ny mpifoka rongony tsy manao na inona na inona (kamo)?
Nitsikera ny rafitra fitiliana Amerikana ao Florida i Maggie Gardener:
@Kev_Hearn tsy tsara ny traikefa Amerikana. Vakio ity lahatsoratra ity https://t.co/h4JYva4SwS
Tsara ho an'ny orinasa mpanao fitiliana rongony irery ihany
Milaza ny lahatsoratra tamin'ny taona 2013 tao amin'ny Sobre Ebriedad, bilaogin'ny mpianatra lalàna sy mpikatroka fahasalamam-bahoaka, fa “ny fanjakana hany mampihatra ny fitiliana rongony ho an'ny fandaharana Fanampiana Vonjimaika ho an'ny Fianakaviana Sahirana (TANF) [fanampiana ara-tsosialy] – dia very vola tokoa».
Namintina sary-sy-soratra i Josh Butler ao amin'ny Huffington Post Australia, izay milaza fa tokony ampidirina ao anatin'izany koa ireo mpandray fanampiana hafa amin'ny volan'ny governemanta, indrindra ny parlemantera:
Ny valinteny marobe tao amin'ny Twitter mikasika ny drafitra fitiliana rongony ho an'ny mpandray fanampiana ara-tsosialy: ataovy fitiliana rongony ihany koa ireo mpanao politika sy ny mpiasan'izy ireo
Ny hafa kosa namely izay hitan'izy ireo fa fihatsarambelatsihin'ny governemanta:
Fitiliana toaka sy rongony ho an'ireo mpandray fanampiana ara-tsosialy amin'ny orinasa, ihany koa?
Tamin'ny fivadihan-javatra hafahafa, mikasa hijery faritra mpifoka rongony be indrindra amin'ny alalan'ny fitiliana ny rafitra fanariana rano maloto ny manampahefana. Nanamafy ilay mpitahiry vola Aostraliana, Scott Morrison, fa ampiasaina amin'ny andrana izany fitiliana izany.
Hugh Rundle, izay mamaritra ny tenany ho mpirenireny [(olona mandehandeha mandinika ny fiarahamonina), namaly hoe:
Amin'ireo zavatra maharikoriko rehetra ataon'ny governemanta ao Aostralia, ny fitiliana rano maloto mba hahitàna izay mpandray fanampiana ara-tsosialy mpifoka rongony no tena hafahafa indrindra.
Nandinika ny sary midadasika kokoa an'ilay antsoina hoe ady amin'ireo mpandray fanampiana ara-tsosialy ny mpaneho hevitra sasany. Tamin'ny lahatsorany “Inona eto an-tany no fohan'ny mpitahiry vola Aostraliana, Scott Morrison? tao amin'ny bilaogy Feon'ny Morontsiraka Avaratra, nanakiana ny tsy fifandraisana amin'ny zava-misy ataon'ilay mpitahiry vola i Clarence Girl. Nitsikera ny fepetra henjana takiana amin'ireo mpitady asa tahaka ny «fampiharana eo amin'ny tany fieritreretan'ny coucou» sy «mafy fo» ihany koa izy.
Manana zavatra atao isan-taona mandritra ny 30 ora isaky ny tapa-bolana ampitomboina 50 ireo mpitady asa 30 hatramin'ny 40 taona. Ahitana asa tapak'andro, asa an-tsitrapo sy karazana fandraisana anjara hafa ny asa. Ireo mpitady asa 55 sy 60 taona kosa dia 25 ora ihany amin'ny alalan'ny asa an-tsitrapo fa tsy manao 30 ora feno amin'ny fitakian'izy ireo. Ireo 60 taona sy eo amin'ny taonan'ny fisotroan-dronono dia manana asa takiana mandritra ny 10 ora isaky ny tapa-bolana, izay mety ho asa an-tsitrapo. 65 taona ankehitriny ny taonan'ny fisotroan-dronono miaraka amin'ny fitomboana tsikelikely 67 taona amin'ny taona 2023. Mamaritra izany sy ireo fanovana tahaka ny andrana fitiliana rongony ny drafitry ny governemanta, Fanovana ny fanampiana ara-tsosialy – Tetibola 2017.
Sean Kelly ao amin'ny gazetibokim-baovao The Monthly ,nanohitra ny fanazavan’ny Praiminisitra Malcolm Turnbull fa momba ny “fitiavana” ny andrana fitiliana rongony. Nilaza i Sean fa ny tena antony dia antso mpandrendri-bahoaka:
[…] Amin'ity tranga ity: mila lohateny momba ny famoretana an'ireo “olona kamo” ny governemanta (ary azony izany). Nanapa-kevitra am-pisalasalana izy fa hisafidy ireo tsy an'asa – eo amintsika izay marefo amin'ny fahantrana, tsy manan-kialofana sy manana olana momba ny fahasalamana ara-tsaina – satria tsy afaka mamaly ady izy ireo
Mandritra izany, tao amin'ny Australia Bulletin, nilaza momba ireo “fanontaniana tsy nahazoam-baliny” momba ilay politika (fanaovan-dalàna) i Jessica:
Miteraka fanontaniana etika marobe ny mombamomba ny tahiry mikasika ireo mpandray fanampiana ara-tsosialy, izay tokony hovalian'ny governemanta.
Afaka arovana tsara araka ny tokony ho izy ve ny fiarovana ny tahiry?
Ho ampiasaina amin'ny tanjony voalohany ihany ve ny vaovao?
Inona no dingana ilaina hanoherana ny fifantenanareo ny andrana fitiliana rongony?
Iray amin'ireo vitsy an'isa tao amin'ny aterineto izay naneho ny ahiahiany momba ny fitomboan'ny fitsofohana an-keriny amin'ny fiainantsika manokana izy:
Maro amin'ireo asanay ankehitriny no azo dinihana, azo karohina sy mahomby, ary azo idirana sy midadasika tsy mbola nisy toy izany ny fanarahamaso. Saingy mety ho henjana ny fiantraikan'izany amin'ireo fiarahamonina mahantra.
Ilay antsoina hoe andrana fitiliana rongony «kisendrasendra» dia ohatra iray amin'izany lamaody vaovao mampiahiahy izany.
Nampiseho ny fihetseham-po an-tserasera ny siokan'i Lynlinking:
Inona no fohan'izy ireo ao Canberra? Mikendry ireo marefo ny andrana filitiana rongony